घरमै डाक्टर : तीन हप्तादेखि लगातार खोकी लागिरहेको छ, के भएको होला? के गर्नुपर्छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
घरमै डाक्टर : तीन हप्तादेखि लगातार खोकी लागिरहेको छ, के भएको होला? के गर्नुपर्छ?
बुधबार, पुस ४, २०७५, १९:४४:४०
प्रश्न : तीन हप्तादेखि लगातार खोकी लागिरहेको छ। के भएको होला? के गर्नुपर्छ? - केपी
उत्तर : तीन हप्ताभन्दा बढी समयसम्म पनि लगातार खोकी लागेपछि मात्र परामर्श लिन डाक्टरकहाँ जाने मानिस थुप्रै भेटिन्छन्। विशेषगरी, गरी फ्लु फैलने समयमा र फ्लुको संक्रमण भइसकेका बिरामीहरुमा यो समस्या बढी देखिने गरेको छ। फ्लुको सिजन सुरु भएसँगै धेरै मानिसलाई ज्वरो आउने र रुघाखोकीको समस्या हुने गरेको छ।
- डा शेरबहादुर पुन, शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल